Mawiricheya muUnited States | Karman® Mawiricheya
Inofungidzirwa Kuverenga Nguva: 4 maminitsi
Kuzvimiririra mukufamba ndicho chimwe chezvinhu zvakakosha zveakakwira unhu yehupenyu hwevanhu vakaremara. Verenga pazasi kuti uwane rumwe ruzivo nezve mavhiripu muUnited States.
Sei Are Wiricheya Zvakakosha Zvakadii?
Kuzvimirira kufamba kunogona kuwanikwa nemhando dzakasiyana siyana dzekufamba-dzakabatana. Nekudaro, zvinhu zvakaita semidziyo yekugadzira, orthotic inofambiswa, kana mawiricheya e exoskeleton or zvemagetsi mavhiripu ramba uchigadzira chikamu chikuru kwazvo chemidziyo yekubatsira iri kushandiswa. IUS ndiyo musika wedunhu wakakura wemusika unofambiswa uye wekushandisa inofungidzirwa kuti ichakura zvakanyanya nekuda kwekukwegura kwevana mabhoomers uye kuwedzera hupenyu hurefu.
Izvi zvinotarisirwa kuwedzera mukukura kwe vanoshandisa wiricheya, pamwe nevanhu vazhinji vari kuenderera mberi nekukudziridza hurema hwechipiri, yakawedzera iyo zvinodiwa yezvigadzirwa zvakadaro.
Vanhu Vangani Vanoda Mawiricheya muUnited States?
Zvinoenderana neazvino data reCensus reUS, vangangoita makumi maviri muzana yevanhu vemuUS vane zvimwe mhando of kuremara. Vanenge gumi muzana vane kuremara mumuviri kana rudzi rwekukanganisika kwekufamba. Vanopfuura mamirioni matatu maAmerican vanoshandisa wiricheya kana an zvemagetsi wiricheya nguva izere. Vanhu vakaremara ndiro rakakura boka revashoma muUS. Izvi zvinoreva kuti pane zvakawanda vanoshandisa wiricheya kupfuura vatema, maSpanish, maAsia, uye vanhu vanoziva seLGBTQ +.
The remara nharaunda inozviona sevasingaratidzike. Vanhu vazhinji, vakuru vakuru vehurumende, uye varidzi vemabhizinesi havazvifunge pavanenge vachigadzira zvisarudzo zvakakosha. Kushaikwa kwekutarisirwa kunokanganisa ivo kugona kuve chikamu chenharaunda.
Vanhu vane kufamba nyaya dzinoda imwe mhando yechigadzirwa kuvabatsira kutenderera. Chigadzirwa ichocho chingave Walker, mumwe wiricheya yemawoko, simba wiricheya, kana an wiricheya yemagetsi. Tekinoroji ine zvakanyanya yakagadziridzwa. Kune macheya emagetsi anokwanisa kusimudza munhu kuti asvike nyore pazvinhu pasherufu. Izvi zvinobatsirawo kuita nhaurwa yeziso nemeso nevanhu.
Vanhu Vangafamba Sei Pasina Mawiricheya muUnited States?
mavhiripu muUnited States anowanikwa munzvimbo dzakasiyana siyana dze mitengo izvo zvinowanzove zvichibva pamadhora zana kusvika churu. Yakakwira madhora emamodeli anogona kazhinji ipa mhando iri nani yehupenyu kumushandisi, zvinoenderana nezvavanoda.
kana wiricheya mushandisi haana yake kombi, inogona kudzikamisa yavo sarudzo dzekufambisa. Vaizoda a kufambidzana tekisi, zvinosiririsa kushomeka, kunyangwe mumaguta makuru muUS. Izvo hazvisipo mumataundi madiki, kunze kwekunge yakazvimirira kontrakta iri kupa yavo kufambidzana van.
ruzhinji rwevanhu kutakura ndiko mumwe nzira wiricheya vashandisi vanogona kushandisa. Nezvikonzero zvese zvinoshanda, iyo New York pevhu system haibvumirwe - vanoshandisa wiricheya. Chiteshi chengarava chete chine maelevheti kumapuratifomu, uye kazhinji iwo maelevheti haasi kushanda. Maguta mazhinji makuru ari kuita basa rakakura mukupa kufambidzana mabhazi e wiricheya vashandisi, asi zvimwe zviteshi zvebhazi hazvina mabheji ekuchengetedza pamigwagwa iri padyo.
Zvichienderana nekwavanoenda, vamwe vanoshandisa wiricheya vaizofanira kupedza maawa mubhazi kana kuchinjana mabhazi kuti vafambe mamaira mashoma chete nekuda kwenzira dzakasiyana dzemigwagwa uye nguvai vanoshandisa wiricheya inogona kupinda mukati. Kunyangwe njanji masisitimu anopa kwete kufambidzana sarudzo dzekufambisa kubatsira vanoshandisa wiricheya kufamba kupfuura panomira njanji. Nehurombo, yakawanda yenguva, yakanyanya kuomera wiricheya vashandisi kuti vaende kumwe kunhu uye hazvina kukodzera kuedza kunodiwa.
wiricheya Vashandisi Kunze Kweimba Yavo
S-115 Hwiricheya Huru yekunze
Kunze kutakura, kune zvimwe zvakawanda zvikonzero zvekushomeka kwekufamba kunokonzera. Iyo huru ndeyekuti masuo ezvivakwa zvakawanda nemabhizinesi haasi nyore kufambidzana. Nzira dzakawanda dzemigwagwa dziri hazviiti kuyambuka nekuda kwezvikonzero zvakasiyana, zvinosanganisira ivo kuva vane bumpy uye vasina kuenzana. Zvizhinji wiricheya vashandisi vanogara muhurombo hwakanyanya uye havana mari inogona zvinopa navo kutakura. Vamwe vanhu vanoshandisa mavhiripu inogona kuva kurapwa kwemamiriro izvo zvinogona kukonzeresa dzimwe nyaya pavanosiya runyararo uye kugarika kwemisha yavo. Zvirwere zvakaita sekurwadziwa kusingaperi, kuneta kwakakomba, uye kukanganisika kwepfungwa zvinoita kuti zvionekwe pachena. Iko kusakwanisika kwenzvimbo dzevanhu kuwacha dzinogona kunge dziri nhamo.
Haasi ese chivakwa ane akaenzana saizi madhoo. Saka, kana iwe uri mu wiricheya, unowanzove panjodzi yekubatwa kana kunamirwa mune mumwe kana mumwe musuwo kana mukova. Izvi zvinowanzoitika muzvimbuzi zvezvivakwa zveruzhinji. Kunyangwe dzimba dzekugezera akaita nokuti wiricheya vashandisi vane madhoo mashoma. Saka, chengetedza iyo kwete wiricheya inogona kupfuura nyore. Uye kana musuwo wakashongedzerwa nemahinji echisipiti, saka iwe waizodaro inoda batsira kupfuura.
Isu tinovimba kuti pachave neshanduko mune ino yakakosha nyaya iyo inomutsa kuenderera shanduko. Tinofanirwa kushanda pamwechete takanangana nechinangwa chimwe chete chepamusoro kune batsira wiricheya vashandisi. Zviito zvinofanirwa kutorwa kuvabatsira kuti vazvimiririre zvakakwana uye vanoshanda zvakanyanya mumidziyo yavo. Vanofanirawo kuchengetedzwa kubva pamatambudziko echipiri anosanganisirwa nawo wiricheya shandisa, nyatsobatanidzwa munharaunda, uye urarame uchishanda uye utano mararamiro.
UK: Makambani emabhazi 'haadiwe' kumanikidza vabereki vane vatyairi vanogadzirira vashandisi vewiricheya
Ndeapi Matambudziko Anotarisana nevashandisi veWiricheya?